वडाध्यक्षमा पुष्प कार्की नै किन ?
नेपालदृष्टि । “म अहिले ब्यस्त छु ।” उनले भनेपछि म उनलाई भेट्न वडा नं.८ को कट्नु खोलातिर लागे । न भन्दै उनि त्यही भेटिए । मेरो अड्कल फेल खायो । मैले सोचेको थिए उनि मलाई झाट्दै छन । तर होईन रहेछ । साँच्चै उनि कट्नुको कजेला भन्ने ठाँउमा एउटा सिमसारको निर्माण कार्यमा ब्यस्त रहेछन ।
जनप्रतिनिधि विहिन हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसका युवा नेता पुष्पबहादुर कार्की आफ्नो वडामा भएका पर्यटकीय स्थलहरुलाई निर्माण तथा विस्तारमा लागि परेका छन । केही न केही विकास र सामाजिक कार्यमा समलग्न रहदै आएका कार्की “जनता बाघ,सिमसार पर्यटक विकास तथा विस्तार उपभोक्ता समितिका सचिव पनि हुन ।
“हाम्रा वडामा त्यस्ता धेरै सिमसार क्षेत्रहरु छन, जसलाई आन्तरिक पर्यटन स्थल बनाएर थोर बहुँ आर्थिक आय र रोजगारिको विकास पनि गर्न सकिन्छ । त्यति मात्र होईन वडासँगै सिंगो नगरनै सुन्दर,सफा र स्वच्छ पनि बन्न सक्छ ।”उनि बताउँछन ।
लामो समय बैदेशिक रोजगारको सिलशिलामा विदेशमा पनि बसेका कार्की युवा शक्तिले देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई परिर्वतन गर्न सक्ने कुराको मान्यता राख्द्छन । “त्यसैले म मुलुकको मेरुदण्डनै युवालाई मान्दछु ।”उनि बताउँछन ।
देशमा रोजगारको श्रृ्रजना नहुनु र वेरोजगार भएर बस्नुको पीडा र बाध्यताले विदेशिएका युवाको भावनालाई नजिकबाट स्पर्श गर्न क्षमता भएका कार्की भन्द्छन, “म विदेश तथा स्वदेशमा रहेका युवाहरुसँग सजिलै हेलमेल हुुन सक्छु । उहाँहरुसँग सहजरुपले सर सल्लाहमा काम गर्न पनि सक्छु । उहाँहरुको सहयोग पाए वडाका बाटो,पुल,विजुलीआदि लगायत धार्मिक तथा सामाजिक विकासका कार्यमा अगाडि बढ्न सक्छु ।”
(वडामा रहेका आन्तरिक पर्यटन स्थलहरुको खाका तयार गर्दै युवा नेता कार्की)
श्री जनता बाघ सिचाई, जल उपभोक्ता संस्थाका सचिव समेत रहेका कार्की मूलत किसानको हित,सर्मद्धन र विकासकालागि सर्मपित रहेको देखिन्छ । “हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यहाँका अधिकांक्ष जनताहरु कृषि पेसामा नै आश्रित छन । त्यसैले कृषिलाई कसरी सुलभ र सहज तरिकाले आधुनिकरण गर्ने र कसरी कृषि यन्त्रिक प्राविधिकतर्फ लग्ने भन्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनि बताउँछन । हामी किशानको जीवनस्तर उठाउँन कृषि क्रान्ति अहिलेको मूल आवश्यकता हो । त्यसैले मेरो मुल एजेण्डा नै यसै क्षेत्रको विकास र विस्तार हो ।
आर्को तर्फ किसानले उत्पादन गरेका बस्तुको यहाँ आफ्नो बजार छैन । विउ,विजन र मलको सधै अभाव र कालो बजारी ब्यापक छ । यसलाई नियन्त्र गर्न अहिलेको मूल आवश्यकता हो । वडामा राम्रो र सुलभ तरिकाको कोल्डस्टोरको पनि आवश्यकता छ ।” उनि बताउँछन ।
वडामा खोलिएका वित्तिय संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुले दिएका आर्थिक कारोवार तथा सहुलियतका बारेमा सामान्य किसानहरु पहुँच बाहिर छन । यस्ता वित्तिय सुविधाबाट कोही पनि बन्चित हुनु नपरोस भन्ने कार्की दाम्राभिट्टा सहकारी संस्थाका सदस्य पनि हुन ।
विएड हेल्थ अध्यायनरत कार्की अहेवा असिष्टेण्ड(प्राविधिक) पनि हुन । वडामा सहज र सुलभ र राम्रो स्वास्थ्य क्लिनिक नरहेको बताउँने कार्की यसको लागि पनि विशेष पहल हुने कुरा पनि उनि बताउँछन ।
सिमसार क्षेत्रको परिक्षण गर्दै ।
किन स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु सफल ?
राप्रपाको वडा कार्य समितिको कार्यलय स्थापना